Biyo-bax deg deg ah: waa maxay, sababaha iyo daaweynta si looga fogaado | Ragga Stylish
Xaqiiqdii waad maqashay biyo bax deg deg ah. Rag badan ayaa la dhibtoona dhibaatadan waxaana badanaa lagu jahwareeriyaa xaqiiqda ah "waqti yar oo sariirta lagu qaato". Biyo bax deg deg ah waa dhibaato dhacda marka biyo baxu ku yimaado qaab joogto ah oo isdaba joog ah ka hor ama ka dib markuu dhex galo. Sida iska cad, xaaladani had iyo jeer waxay ku dhacdaa ninka iyo waxba kuma laha cabirka guska.
Maqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan ku sharaxno sababaha dhibaatadan iyo sida loo xaliyo. Haddii aad ka walwalsan tahay ama aad rabto inaad wax badan ka ogaato, waa inaad sii wadataa akhriska.
1 Waa maxay biya baxa degdega ah?
4 Sababaha biya baxa degdega ah
5 Sidee looga adkaadaa biya baxa degdega ah
Waa maxay biya baxa degdega ah?
Ugu horreyntii, waa inaad si aad ah ugu caddaato fikradda. Waxa jira dad badan oo bilaaba inay wax galaan oo afar daqiiqo ka dib ay biyo baxaan. Tan waxaa badanaa lagu yiraahdaa biyo bax deg deg ah, laakiin shaqo kuma lahan. Adkaysiga nin ee wejiga gelitaanka wuxuu la xiriiraa heerka dareenka, kacsiga, iwm.
Si ay suurtagal u noqoto in laga hadlo biya baxa deg degga ah, waa inay u muuqataa si isdaba joog ah runtiina dhibaato u keentaa mid ama labadaba xubnaha lamaanaha. Markay tahay biyo baxa deg degga ah, Waxaan ula jeednaa inay ka timaaddo xiriirka galmada ugu horreeya ilaa laga helayo hadhow.
Qaab fudud, waxaan dhihi karnaa biyo bax deg deg ah ayaa dhaca kahor inta aysan labada xubnood ee lamaanaha rabin. Cunsurkaan wuxuu dhibaato weyn ku abuuraa xiriirka galmada, gaar ahaan hadday si isdaba joog ah u dhacdo.
Dhibaatadani way dhici kartaa rag iyo dumarba. Tani waxay caadi ahaan dhacdaa mararka aad kacsan tahay. Si kastaba ha noqotee, dhibaatadu waxay bilaabmaysaa inay soo muuqato markay ku dhacdo inta badan galmada.
Daraasado iyo sahanno la sameeyay ayaa tilmaamaya in dhibaatadu ay saameyso 30% ragga. Iyada oo ay taasi jirto, qofku wuu ka baqayaa inuu la tashado dhakhtarka. Ma jiro da 'go'an oo ay dhibaatadan ka soo muuqan karto. Dhacdooyinka ayaa waxyar ka sarreeya ragga da'da yar. Kuwa ugu khibrad la'aanta ah si fiican uma xukumaan qiyaasaha raaxada waxayna ku dambeeyaan inay biyo ka baxaan iyagoo aan dooneyn.
Waxaa jira daraasado badan oo dhowaan la sameeyay oo raadiyay sababta keenta biya baxa degdega ah. Sababahaas waxaa ka mid ah:
Kalsoonida oo lunta.
Walaaca ku jira ninka iyo lamaanihiisa.
Ku qanacsanaanta noloshaada galmada.
Heerka qanacsanaanta lamaanaha.
Ragga ay dhibaatadan saameysay aad ayuu ugu dhex milmay oo kuma raaxeysanayo xiriirka galmada. Dhibaatooyinka ay haweeneyda ka muuqato waxaa lagu muujiyaa hoos u dhac ku yimaada raaxadeeda iyo awood la'aanta inay gaarto kacsiga. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay cadeynayaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya awood la'aanta ninka inuu sii haysto biyo baxa iyo cillada galmada ee wehelkaaga.
Dhibaatadani waxay keentaa saameyn shucuur oo xoog leh oo ay sii dheeraato, saameynta xun ee ay ku leedahay shaqada galmada. Talada ugu badan ee la siiyaa ayaa ah haddii ay dhibaato jirto, la tasho khabiir khibrad u leh arrimahaas.
Sababaha biya baxa degdega ah
Marar badan sababaha lama yaqaan. Si kastaba ha noqotee, inta badan waxaa jira dhibaatooyin nafsaani ah iyo kuwo dabiici ah oo soo saari kara.
Ragga badankood waxay la kulmaan biyo bax deg deg ah galmada ugu horeysa. Waxay guud ahaan bilaabaan inay xakameeyaan xawaaraha biyabbaxooda maadaama khibradooda galmada ay sii kordheyso. Tani waxay abuureysaa jawi aad ku kordhinayso isku kalsoonaantaada.
Sababaha ugu weyn ee nafsiyan xakamaynta shahwada waa walaac, barasho adag, dambi iyo cabsi ah inuusan noqon qof jecel wanaagsan. Dhammaan dareenka xun waxay xoojiyaan guuldarrooyinka ka dib khibradaha xun ee ugu horreeya. Sidaa darteed, waxaa sii kordhaya walaaca iyo jahwareerka.
Waxaa jira sababo kale oo dabiici ah sida qanjirka 'prostatitis', qaadashada daroogada, dhibaatooyinka tayroodhka, cudurada neerfaha. Xaalado badan, labada arrimoodba way dhici karaan isla waqti isku mid ah.
💡 Xusuusnow in cabirka guskaagu uusan xiriir la lahayn dhibaatadan ... laakiin haddii aad weli rabto inaad si dabiici ah u weyneyso cabirka guskaaga, waxaan kugula talineynaa soo dejiso buugga guska sayidkiisa adigoo gujinaya halkan
Soo koobid ahaan, waxaa la dhihi karaa biya baxa deg degga ah ayaa dhaca sababtoo ah maskaxdu sifiican ugama jawaabeyso xawaaraha xad dhaafka ah ee dareenka galmada.
Sidee looga adkaadaa biya baxa degdega ah
Markay dhibaatadani soo muuqato marmar uun ma jiraan wax laga walwalo. Waad kala hadli kartaa xaalada lamaanahaaga waxaadna isku dayi kartaa inaad xakameyso welwelkaaga iyo dambigaaga. Sidan oo kale, biyo baxa ayaa la xakameynayaa.
Haddii dhibaatadu sii socoto muddo dheer oo raaxo ku abuureysa lamaanaha, waxaa fiican inaad la tashato xirfadle sida ugu dhakhsaha badan. Bukaannada dhibaatadan qaba marka lagu daro tabar darrida waa in laga daaweeyaa cillad kacsi. Dhakhtarku waa inuu kuu sharraxaa had iyo jeer daaweynta la heli karo iyo faa iidooyinka ama halista uu mid kastaa yeelan karo.
Waxaa jira laba nooc oo daaweyn aasaasi ah.
Cilmi-nafsiyeed. Kuwani waxay ku saleysan yihiin in qofka la wacyi geliyo sixitaanka dhibaatadooda iyo yareynta dareenka dambiga. Waxaa lagu sameeyaa teraabiyada cilminafsiga iyo daaweynta habdhaqanka.
Farmashiiste. Waa kuwa isticmaala daroogada sida Dapoxetine iyo kareemada suuxdinta ee guska.
Dapoxetine ilaa iyo hada waa daroogada kaliya ee la cadeeyay inay leedahay saameyn ka hortag deg deg ah oo ku dhaca biya baxa. Waa daawo ka shaqeysa heerka maskaxda si ay u daahiso biyo baxa. Daraasado waaweyn, oo lagu sameeyay in ka badan 6.000 xaaladood, ayaa muujiyay in bukaanada helay Dapoxetine ay si aad ah u daahiyeen biyo baxa iyo hagaajinta xakamaynta shahwada marka la barbar dhigo bukaanada helay placebo (natiijooyinka ka sii xun).
Kariimyada suuxinta waxaa lagu marin karaa guska nus saac ka hor galmada.
Haddii aad u maleyneyso inaad ku dhibaataysan tahay dhibaatadan, waxaa fiican inaad sida ugu dhaqsiyaha badan ugu tagto takhasusle ama la hadal lammaanahaaga. Maskaxdaadu waxay noqon kartaa cadawgaaga ugu xun iyo Inaad naftaada ku canaanato wax ma hagaajineyso. Waa dhibaato ka soo horjeedda rabitaanka qofka. Sidaa darteed, adiga iyo lammaanahaagu waa inaad dulqaad yeeshaan oo aad dhibaatada wada qabataan.
Waxaan rajeynayaa inaad awood u yeelatay inaad waxbadan kabarato mowduucan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Bilowga dhicis
Kareemada jirka ka sii daaya